Uyenza njani izitikha ngeTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 226
Isicelo seTelegram wayengomnye woovulindlela ekukhuthazeni izitikha ezidumileyo. Ziluhlobo lwee-emojis ezinkulu kwaye ngazo singenza ukuba incoko yethu ibe yinto eyonwabisayo ngakumbi neyonwabisa. Ukuba ufuna ukufunda ukwenza izitikha zeTelegram, hlala nathi.
Itelegram inenani elikhulu lezincamathelisi esinokufikelela simahla kwaphela, nangona kunjalo zikho ezinye iindlela zokwenza izitikha zethu kwaye wabelane ngazo nabahlobo kunye nosapho. Namhlanje sifuna ukukufundisa indlela yokwenza izitikha zeTelegram.
Uninzi lwabasebenzisi bezixhobo zokuthumela imiyalezo kwangoko wakha wazisebenzisa izinto ekuthiwa zizincamathelisi, kodwa uyazi ukuba bazalwa njani kwaye bahluke njani kwii-emojis zesiko?
Xa sithetha ngezincamathelisi sithetha uhlobo lwee-emojis kodwa ezinkulu. Ezi zincamatheliso zenziwe ngeefoto kwaye ngoku baye baba sesinye sezixhobo ezikhethwa ngabasebenzisi.
Izitikha zazalwa zinenjongo enye: Yenza ukuba iincoko zethu zibonakale ngathi ziyonwabisa kwaye ziyimvelaphi. Namhlanje sinokufumana izitikha zoopopayi, enye yezona zinto zintsha zokwenza isicelo seTelegram.
Ke unokwenza izitikha zeTelegram
Ukwenza izitikha zeTelegram kulula kakhulu. Abanye abasebenzisi basebenzisa iinkqubo zokuhlela ukwenza umxholo ophezulu, nangona kunjalo kukho iindlela ezilula zokwenza olu hlobo lwezinto, umzekelo, izicelo ezinikezelweyo ekwenzeni izitikha.
Abasebenzisi be-Android banokufikelela kuluhlu olude lweapps ukwenza izitikha. Into ekufuneka uyenzile kukukhuphela enye yeziapps ukusuka kuGoogle Play kwaye uqalise ukubhabha kuyilo lwethu. Sicebisa ukuba ukhuphele uMenzi weSitikha weTelegram, enye yezona zigqibeleleyo kunye nezona zilungileyo.
Isitikha sesinye sezona zicelo zibalaseleyo ukwenza izitikha zeTelegram. Kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso kwaye ngokuzenzekelayo ungaqala ukwenza ipakethi yesitikha. Ngolu hlobo lwesixhobo unokuhlela izincamathelisi kwaye uzongeze kwiTelegram.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukwenza izitikha
Enye yezinto zokuqala ekufuneka uzenzile Yenza iphakheji apho uza kongeza isitikha ngasinye. Ungayenza ngemixholo, okt iipakethe zezinja kunye nezinye iikati.
Vula isicelo se-Stickery kwaye ucofe ukhetho "Yenza ipakethe"
Ngoku kuya kufuneka uyinike igama Kwipakethi yakho eyenziweyo. Unokhetho lokongeza igama lomntu oyidalayo.
Inyathelo elilandelayo iya kuba kukucofa iqhosha "Yenza ipakethe":
Sele ndiyenzile ipakethi, ngoku ndenza ntoni?
Emva kokwenza ipakethi, lixesha lokuqala ukongeza zonke izitikha esizifunayo. Ungayenza ngokucinezela isitshixo "Yongeza isitika". Emva koko kuya kufuneka ukhethe kwigalari yakho umfanekiso ofuna ukuwuguqula ube sisincamathelisi.
Ngoku kuza eyona nto ibalulekileyo: Yila kwaye uhlele umfanekiso esifuna ukuwuguqula ube sisincamathelisi. Isicelo esifanayo sikunika uthotho lwezixhobo eziluncedo onokuzisebenzisa. Kweli candelo ungatyala umfanekiso, ususe imvelaphi kunye nenani lezinye izinto.
Isicelo sibandakanya ukhetho lokongeza iifilitha, isicatshulwa kunye nemida kwizitikha zethu. Dlala ngengcinga yakho kwaye wenze owona mxholo ubalaseleyo.
Okokugqibela kufuneka ucofe ku "Gcina”Ukugqiba inkqubo yendalo. Ngoku okuseleyo kuya kuba kukudibanisa nesicelo seTelegram. Ungayenza ngokuthe ngqo kwisicelo se-Stickery:
Cofa ku- “Ukuthumela ngaphandle"
Cinezela "Yongeza izitikha ze-X"kwaye ilungile
1 Yintoni izincamathelisi?
2 Ke unokwenza izitikha zeTelegram
3 Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukwenza izitikha
4 Sele ndiyenzile ipakethi, ngoku ndenza ntoni?